धोनीको नाममा छन् ३ खराब कीर्तिमान - Everest Dainik - News from Nepal
धोनीको नाममा छन् ३ खराब कीर्तिमान
काठमाडौं : पूर्व भारतीय कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी एक महान् क्रिकेटरका रूपमा परिचित छन् । उनी भारतीय टिमका सफल कप्तान मध्ये एक हुन् ।
धोनीले आफ्नो क्रिकेट करियरमा मानसम्मान, धन सबै हासिल गरेका छन् । उनकोे कप्तानीमा भारतले टी-२०, एकदिवसीय विश्वकप र च्याम्पियन्स ट्रफी जितेको छ ।
विश्व क्रिकेटमा सफल मानिएका धोनीको नाममा पनि खराब कीर्तिमान छन् भनेर सुन्दा आश्चर्य पनि लाग्न सक्छ । क्रिकेट तथ्यांकलाई केलाउने हो भने उनको नाममा ३ खराब कीर्तिमान छ । ती खराब कीर्तिमानलाई धोनीलगायत उनका समर्थक कहिल्यै सम्झन चाहँदैनन् । के हुन् त धोनीको नाममा रहेका खराब कीर्तिमान?
याे पनि पढ्नुस भारतका पूर्व कप्तानले भने, ‘धोनीलाई ससम्मान विदा गरौं, पन्त पहिलो रोजाई’
१. लगातार ४ पटक टेष्ट सिरिज हार्ने कप्तान : धोनी टी-२० र वानडे बाहेक टेष्ट क्रिकेटका पनि सफल कप्तान हुन् । यद्यपि उनको कप्तानीमा भारतले लगातार ४ टेष्ट श्रृंखला पनि हारेको छ ।
धोनीको कप्तानीमा भारतले पहिलो पटक २०१३ मा दक्षिण अफ्रीकासँग १-० ले टेष्ट सिरिज हारेको थियो । त्यस्तै, उनको नेतृत्वमा भारतले दोस्रो पटक २०१४ मा न्यूजिल्याण्डसँग १-० ले टेष्ट श्रृंखला हारेको थियो ।
त्यस्तै, धोनीको कप्तानीमा भारतले तेस्रो पटक २०१४ मा इंग्ल्याण्डविरुद्ध ३-१ ले टेष्ट सिरिज हारेको सिरिज थियो ।
त्यस्तै, उनको कप्तानीमा भारतले चौथो पटक २०१४ मा अष्ट्रेलियासँग २-० ले टेष्ट सिरिज गुमाएको थियो ।
२. बंगलादेशविरुद्ध वानडे सिरिज हार्ने पहिलो कप्तान : भारतीय टीमले सन् २०१५ मा बंलादेशको भ्रमण गरेको थियो । जसमा महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा भारतले वानडे सिरिज खेलेको थियो ।
भारत पहिलो पटक बंलादेशसँग सो सिरिजमा लगातार २ म्याचमा पराजित हुन पुग्यो । भारतले पहिलो म्याच ७९ रनले हार्दा दोस्रो खेल ६ विकेटले गुमाउनु परेको थियो । यसअघि भारतले बंगलादेशसँग वानडे श्रृंखला गुमाएको थिएन ।
३. एसियाभन्दा बाहिर १ पनि शतक बनाउन नसक्ने कप्तान : महेन्द्र सिंह धोनीको ब्याटिङमा कुनै शंका छैन । उनले भारतलाई कयौँ म्याच जिताएका छन् । धोनी विश्व क्रिकेटका सर्बाधिक सफल ‘फिनिसर’ हुन् । यद्यपि उनले एसियाभन्दा बाहिर १ शतक पनि बनाउन सफल भएका छैनन् ।
धोनीले आफ्नो करियरमा तीनै फर्म्याटमा कुल १६ शतक लगाएका छन् । अहिलेसम्म उनले १० शतक वानडे र ६ शतक टेष्टमा बनाएका हुन् ।
धोनीले टेष्ट म्याचमा दोहोरो शतक पनि लगाएका छन् । उनले सबै १६ शतक भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा बनाएका हुन् । एजेन्सी
ट्याग्स: कीर्तिमान, भारतीय टिम, महेन्द्र सिंह धोनी